Ọtụtụ atụmatụ na nkọwa nke Moto Z4 na-akwadoro | Gam akporosis
Akuko ohuru ekpughere nke a Motorola ẹkedori Moto Z usoro nke smartphones nso. Na mbido afọ a, OnLeaks kesara nsụgharị nke Motorola smartphone Moto Z4 Play, ya mere mbata ya, yana ụdị ọkọlọtọ, amụ anya kemgbe ọtụtụ ọnwa.
Na Machị, Federal Communications Commission (FCC) kwadoro ekwentị Motorola ọhụrụ akpọrọ "foles." Ekwuru na otu ekwenti nwere aha koodu di n'ime ya dika 'raya'. Ihe niile na-egosi ihe bụ Moto Z4, nke, na oge a, a na-enyocha njirimara ya na nkọwa ya ọzọ, dị ka oge gara aga.
Achọpụtara na nso nso a ekwenti juputara na udiri etiti, si otú a na-akwado nkwuputa ndị gara aga. Na mbido ọnwa a, Evan Blass kesara nsụgharị nke Moto Z4 smartphone, bụ nke a na-ahụkarị ụdị ọdịdị nke etiti a.
Moto Z4 na-aza
Akwụkwọ FCC maka 'foles' nwere akara ngosi 'XT1980-3'. Dị ka ndị a si kwuo, a na-eji mobile agbakwunyere mobile Snapdragon 675 ọ ga-abịakwa na RAM 4 GB ma ọ bụ 6 GB. Ọ nwere ike ịbịa ma nhọrọ 2.1GB na 64GB UFS 128 nchekwa. Ọzọkwa, ọ ga-ejupụta na batrị 3,600 mAh. N'aka nke ya, FCC na-ekpughe na nkwụnye ọkụ ntanetị ya na-akwado nkwado maka ngwa ngwa ngwa ngwa 18-watt.
Ngwaọrụ ga-eji otu igwefoto rụọ ọrụ na azụ ya. Nke a ga-abụ a 5 megapixel S1KM48SP ihe mmetụta site na teknụzụ Q nke ga - ejide foto megapixel 12 na ndabara. Maka iji foto onwe, ekwentị ga-agụnye ihe mmetụta 5-megapixel Samsung S2K5X25.
FCC filings enweghị ozi ọ bụla gbasara nha ihuenyo gị. Otú ọ dị, a maara ekwentị iji tụọ 157 x 75mm, nke yiri nha nke Moto G7 Plus nke na-abịa na 6.2-inch IPS LCD ihuenyo nwere akara mmiri. Ya mere, Moto Z4 nwere ike ịbịarute na otu ogwe aka ya.
Ihe a maara banyere ekwentị mkpanaka bụ na A ga-akwadebe ya na ngere mkpisiaka ihuenyo nke Goodix wetara. A na-atụ anya na ama a ga-ebu ụzọ buru ya A gam akporo 9 achịcha na mgbakwunye ole na ole, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ dị ọcha. N'ikpeazụ, ekwentị ga-enwe Moto Mod ngwa mgbakwunye.
N'oge na-adịbeghị anya, onye na-eri mmiri kpughere nke ahụ ọnụ ya ga-adị na ọnụahịa nke $ 399. O kpughekwara ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ nke ekwentị ahụ, dịka ọkwa IP67 na iche iche ebe nchekwa dị iche iche: 4GB RAM + 64GB nchekwa na 6GB RAM + 128GB nchekwa.
Onye nyocha ahụ gosikwara na Motorola ga-ebupụtakwa ekwentị flagship Moto Z4 Force na ikpo okwu mkpanaka Snapdragon 855 na 8 GB nke Ram. Nke a na-atụ anya inwe otu ihuenyo dị ka Moto Z4.
Ihe ndị ọzọ a nụrụ na Z4 Force gụnyere 128GB nke nchekwa ala, ihe nyocha mkpịsị aka na-egosipụta, batrị 3,230mAh, na ntọala igwefoto atọ na ihe nwere ihe mmetụta 48-megapixel, ihe mmetụta 13-megapixel na lens telephoto. Enwere ike ịkọ ya ọnụ $ 650.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » E gosipụtara njirimara na nkọwapụta nke Moto Z4 na ọnwọ ọhụụ ya
Mpi megide ndị ọzọ Player na gị BMX igwe kwụ otu ebe na Stickman Bike Agha